Katapila discontinues track u, akwụsị ụlọ na ogidi n'ichepụta - China Tianjin Longtop Mining
Mining nnapụta equipments
Mining eji ike equipments
Rock mkpọpu ala ngwaọrụ
Underground n'ibuli equipments
Underground iga ngwá
Katapila discontinues track u, akwụsị ụlọ na ogidi n'ichepụta
The ụlọ ọrụ kwuru na ịgagharị usoro uzo ozo ga-ekwe ka ọ na-eche banyere ndị na ngwaahịa na kasị ukwuu ibu nwere. Katapila kwukwara na ụlọ ọrụ na ya na-ere ahịa esịne ẹdude ahịa na ga na-akwado ndị ụlọ na ogidi na track malite ịgba fleets ugbu a na-arụ ọrụ.
Denise Johnson, otu president na ibu ọrụ n'ihi na akụ ọrụ, kwuru, sị: "Nkea, nke mmezi na Katapila na-aga n'ihu nhazigharị, ga-ekwe ka anyị na-elekwasị anya na ego na ndị ebe nke azụmahịa na-enye ndị kasị elu, adigide ibu na kacha mma ogologo oge alaghachi. "
The ụlọ na ogidi ala Ngwuputa ngwaahịa n'okpuru usoro review agụnye na-aga n'ihu miners, feeder Oké mmali, coal haulage usoro, highwall miners, ụlọ bolters, na ịba uru ugbo ala na dizel ugbo ala. Mgbe n'okpuru nyochaa, Katapila ga-akwụsị na-ewere ọhụrụ iwu.
Otú ọ dị mmepụta nke track u ga-kwụsịrị, na ọ dịghị ọhụrụ iwu ga-.
Johnson kwuru, sị: "Katapila anọgide kwara na ọtụtụ ihe na Ngwuputa ngwaahịa Pọtụfoliyo. Anyị kwenyesiri ike na Ngwuputa bụ ihe mara mma ogologo oge ụlọ ọrụ, na anyị na-anọgide na-etinye ego na a sara mbara elu ugwu nke na ngwaahịa, ma elu ma na nzuzo. Anyị na-ezubere iche anyị investments n'ime Ngwuputa ngwaahịa Pọtụfoliyo-etinye uche na ndị ebe kasị elu profitability nwere. N'otu oge ahụ, anyị na-anọgide na-jikwaa site ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ala-okirikiri anyị akụkọ ihe mere eme. Anyị maara ihe ndị na-aga n'ihu nhazigharị omume na-adịghị mfe na anyị arụ ọrụ ego; Obi dị m ụtọ n'ihi na anyị na otu na-aga n'ihu na ya. "
Na njikọ na mara ọkwa, Katapila na-atụ anya na-eme iji belata ya arụ ọrụ ego na Houston, Pennsylvania, US, ebe ụlọ na ogidi ngwaahịa na-arụpụtara. Ezie na ụlọ ọrụ na-ezube na-ere ụlọ na ogidi na ngwaahịa, ọ ga-amata ndị ọzọ nhọrọ, gụnyere a kwere omume mmechi nke Houston owuwu.
The ụlọ ọrụ kwuru na ngụkọta arụ ọrụ ego mbelata nke ruo 155 ọnọdụ ndị a na-ụlọ na ogidi azụmahịa na-atụ anya, na ụfọdụ na-ewere ọnọdụ ozugbo. O gbakwunyere na, ndị a omume ga-ọzọ anya mmezi ọrụ etoju na ugbu a ọgwụgwụ-ahịa ina.
Na Denison, Texas, ebe track u na-emepụta, odika 40 ọnọdụ ga-ewepụ dị ka a n'ihi nke track malite ịgba ụzọ ọpụpụ na ndị ọzọ na ihe owuwu nhazigharị.
Tụkwasị na nke a Nkea Katapila ga repurpose ya Winston-Salem, North Carolina, owuwu, transitioning ya si a Ngwuputa ka a okporo ígwè owuwu malite mgbe e mesịrị nke afọ a. Operations ga nyefee Ọganihu Okporo ígwè, a Foto-ekesịpde Katapila enyemaka.
N'ihi ya, ụlọ ọrụ ga ibughari n'ichepụta nke ụfọdụ mmiri eji na nnukwu Ngwuputa gwongworo si ya eweta na Winston-Salem ya ẹdude eweta na Decatur, Illinois.
Katapila nwekwara ezube ike a nkewa lekwasịrị anya na-aga n'ihu nnyocha, ngwaahịa mmepe na ọhụrụ ike. The ụlọ ọrụ ga-etolite a otu nnyocha, nkà na ụzụ na ngwaahịa mmepe nkewa napụta elu-edu ngwaahịa iche na usoro mwekota. Nke a nzukọ mgbanwe dị irè site September 1.
Okwu: Room 716, B Building, No.5 Lanyuan Road, Nankai District, Tianjin, China